Finfinnee - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 10:48 3 Sadaasa 202110:48 3 Sadaasa 2021
Dhalattoonni Tigraay magaalaa Finfinnee 'dararaaf saaxilamaa jiraachuu' himatu
Dhalattoonni Tigraay magaalaa Finfinnee jiraatan sababii eenyummaa keenyaan hidhamaa jirra yoo jedhan poolisiin immoo kanneen ergama TPLF raawwatan qabuu koo ittan fufa jedhe.
...tti maxxanfame 5:48 2 Sadaasa 20215:48 2 Sadaasa 2021
Dubartii Finfinneetti horsiisa loonii fi hojii harkaa maatiirraa barte jiruu godhatte
Aadee Qiddisti Abarraa Karrayyuu jedhamti. Jiraattuu magaala Finfinneeti. Qonna magaalaa fi hojii harkaa irratti bobba'uun hojjataa jirti. Keessattuu horsiisa loonii amma gaggeessaa jirtu kanas jalqaba saawwan lamaan kan eegalte Aadde Qiddist yeroo ammaa loowwan kudhan qabdi.
...tti maxxanfame 4:24 1 Onkololeessa 20214:24 1 Onkololeessa 2021
'Marga qofa qabannee malkaa buuna, siyaasa guyyaa kaaniif bulfanna'
Ayyaana Irreechaa Hora Finfinnee fi Hora Harsadii baranaa ilaalchisuun Abbaan Gadaa Tuulamaa fi Qindeessaan Kabaja ayyaana Irreechaa, Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa turtii BBC waliin taasisaniin, Irreechi baranaa of eeggannoo addaa barbaada jedhan.
...tti maxxanfame 8:08 28 Fuulbaana 20218:08 28 Fuulbaana 2021
Manni marii Magaala Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee Kantiibaa Bulchiinsa Magaala Finfinnee gochuun Filate.
...tti maxxanfame 8:48 31 Hagayya 20218:48 31 Hagayya 2021
Finfinneetti manneen barnootaa dhuunfaa kanfaltii dabalan adabamuufi
Magaalaa Finfinneetti manneen barnootaa dhuunfaa kanfaltii fudhatamaa hintaanee taasisan irratti tarkaanfiin fudhatamuuf akka ta'e Biiroon Barnoota magaalattii beeksise.
...tti maxxanfame 5:09 12 Adooleessa 20215:09 12 Adooleessa 2021
Finfinnee bakka bu'uun paarlaamaaf kan filataman eenyu fa'i?
Magaalaan Finfinnee paarlaamaaf teessuma 23 kan qabdu yoo ta'u, paartiin biyya bulchu Badhaadhinni teessoo 22 yoo mo'atu, tokko dorgomaa dhunfaa kan ta'e Daaqoon Daani'eel Kibrat injifateera.
...tti maxxanfame 5:47 19 Waxabajjii 20215:47 19 Waxabajjii 2021
Magaalaan Finfinnee barootaaf jidduugala siyaasaa biyyattii muummee ta'uun tajaajilti. Paartileen siyaasaa hedduunis haala magaalattii jidduugala taasiseen imaammatasaanii wixineessuun yoo socha'an mul'atu. Kanneen paarlaamaa fi mana maree magaalaaf dorgoman eenyufaadha?
...tti maxxanfame 14:26 16 Waxabajjii 202114:26 16 Waxabajjii 2021
Giddugalli siyaasafi diinagdee Itoophiyaa magaalli Finfinnee waggoota darbanif mata duree falmii paartilee siyaasaa turte. Dhimmi bulchiinsaa, abbummaan magaalattii akkasumas faayidaan addaa naannoon Oromiyaa magaalattiirraa qaba jedhamu dhimmoota immaammatafi ilaalcha paartileen siyaasaa Finfinneerratti qaban gargar taasisanidha.
...tti maxxanfame 4:27 15 Waxabajjii 20214:27 15 Waxabajjii 2021
Addabaabaayiin Masqalaa kan bakka Hora Finfinneetti ijaarame seenaa Itoophiyaa keessatti taateewwan gurguddoo yaadataman kessumsiiseera.
...tti maxxanfame 10:24 24 Ebla 202110:24 24 Ebla 2021
Finfinneetti gamoon ijaarsarra jiru jiguun lubbuu namootaa galaafate
Magaalaa guddoo Itoophiyaa Finfinneetti gamoon ijaarsa jiru jigee lubbuu namoota sadii galaafate.
Page 1 Keessaa 6